Abaalmarinta Caddaaladda - Sheekooyinka Guusha
Barnaamijka Abaalmarinta caddalada waxay bixiyeen in ka badan $150 milyan iyadoo la siiyay 100 qof oo laga helay macluumaad looga hortagay weeraro argagixisida caalamka ama ka caawiyey in caddaalad lagu qaado kuwii falal hore ku lug lahaa.
Shakhsiyaad geesiyiin ah oo warbixin soo gudbiyey ayaa suurageliyay in laga hortago iyo in wax laga qabto weeraro argagixisnimo oo dhici lahaa:
RFJ waxay bixisay lacag badan oo milaayiin doolar ah sanadkii 2019 taasoo cadaalad hor keentay hogaamiye muhiim u ah kooxda ISIS ee Bariga Dhexe.
Xilligii uu socday Dagaalkii Khaliijka, nin geesi ah oo u dhashay dal ka tirsan Bariga Aasiya ayaa soo gudbiyey warbixin xasaasi ah oo ku saabsaneyd weerarro ku saabsan falal argagixiso ee la qorsheynayey. Argagixisada waxay hore u sahmiyeen bartilmaameedka ay damacsanaayeen waxayna diyaarsadeen hubka sida darandooriga u dhaca, dhowr bam ah iyo waxyaabaha la qarxiyo. 48 saac ka hor inta aan la qaadin weerarkii ugu horreeyay ee la qorsheynayey, wuxuu warbixiyaha soo gudbiyey warbixinta muhiimka u ahayd in laga hortago qorshaha ay argagixisada damacsanaayeen. Weerarka ayaa laga hortagay, ninkaasi oo ay da’diisu yareyd ayaa la siiyay abaalmarin aad u badan, waxaana qoyskiisa loo raray meel ay ku badbaadaan. Warbixinta uu keenay, waxay suuragelisay in ay ku badbaadaan boqolaal qof naftooda.
Kiis kale, gabadh ay da’deedu yar tahay ayaa soo gudbisay warbixin ku saabsan shakhsiyaad afduubay dayuurad oo si xun u garaacay rakaabkii dayuuradda saarnaa. Waxay sheegtay in ay “aad u doonaysay in maxkamad la soo taago.” Ninkii hoggaaminayey dadkii afduubka geystay ayaa Mareykanka gacanta loo geliyay waana la xiray iyadoo lagu eedeeyay afduub dayuuradeed. Gabadhii yareyd waxaa laga abaalmariyey dadaalkii ay ka geysatay la dagaallanka argagixiska.
Gabadh yar oo kale, oo arday ka ahayd jaamacad qalaad, ayaa indhaheedu ku aragtay dil xun oo loo geystay qof diblumaasi oo Mareykan ah. Gabadha ardayadda aheyd iyo qoyskeeda waxaa loo guuriyey meel ay ku badbaadaan waxaana la siiyay abaalmarin badan.